Yaa kaalin weyn warshadaha ee crypto? top 7
Satoshi Nakamoto – Seeraar, block Chain
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, madax liiska dadka ugu saameynta badan kuwaas oo ku kordhiyeen ugu weyn in industry crypto ah. Under qiimaynta dhawaan quartz, maalmahan laga yaabaa Satoshi Nakamoto ka leeyihiin 980,000 si ay u 1 million bitcoins. Bishii December, abuure qarsoodi ah Seeraar ayaa lahaa $19.4 billion ama aad qofka 44aad ee ugu qanisan dunida. Haddii uusan Seeraar noqon lacagta caalami ah, Satoshi Nakamoto badan tahay in uu noqon doono ninka ugu qanisan dunida. Laakiin kan qarinaya hoos magac maldahan ee Satoshi Nakamoto weli lama yaqaan.
Waxa aynu ognahay waa in White Paper “Seeraar: System Cash Electronic A Peer-to-Peer” waxaa la daabacay hoos magac maldahan ee Satoshi Nakamoto on October 31, 2008. Tani White Paper tilmaamay nidaamka si buuxda u baahsan tahay ee lacagta caddaanka ah ee elektaroonigga ah, oo ma u baahan tahay koox kasta oo saddexaad. profile The on internetka ee Foundation P2P ayaa sheegay in Satoshi Nakamoto waa muwaadin 42-sano jir ah oo Japan, iyo waxay bixisaa link in ay bitcoin.org. Dhamaadkii 2010, Satoshi ku dhawaaqay in uu ka tagay in la qaban “waxyaabo badan oo muhiim ah.” Tan iyo markaas waxaa jiray hawl lahayn oo ku hadlaya magaca Satoshi Nakamoto. Tani waa dhammaan macluumaadka in la tixgelin karo oo lagu kalsoonaan karo; inta kale waa isla dhexmarayo oo alala.
Nick Szabo – cryptography, Cryptocurrencies, Heshiisyada smart
is a famous cryptography specialist and a researcher in theoretical computer science. Waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee soo bandhigay fikradda ah “heshiis smart ” in 1996, kaas oo u ogolaanaya hanti wadaaga iyagoon maciinsan in labada dhinac saddexaad. In 1998, Szabo loogu talagalay farsamo for a lacagta digital baahsan wuxuuna u bixiyey “dahab yara.” Ma aha la yaab leh in ay ka qaybgalayaashu badan oo suuqa crypto isaga Satoshi Nakamoto fiirsan.
Szabo ku dhawaaqay inuu ka soo horjeedo SegWit2x, taas oo ahayd in la qabto ee network Seeraar dayrta la soo dhaafay. Waxa uu ku tilmaamay fargeeto adag ee network Seeraar ah, Seeraar Cash, sida “puppetry sharaabad dhexe.”
Bishii November, Szabo iyo cilmibaadhe Elaine aad soo bandhigay hab shaqo diraya xawaalad Seeraar badan calaamadaha radio. Habkani la soo bandhigay shirkii Seeraar ay kor ee San Francisco si ay u ilaaliso network ka weerarada ka iman kara ee firewalls, Albaabo network, ama siyaabo kale oo loo xakameeyo shabakadaha baahsan oo loo isticmaali karo by dalalka ama shirkadaha isgaarsiinta.
waxaa inta badan loo yaqaan mid ka mid ah milyaneerka horeysay Seeraar, a.k.a. Seeraar Ciise, taas oo aan la yaab leh tan Ver bilaabay maalgashiga Seeraar sida ugu horreysa ee in 2011. Waxaa xusid mudan in Ver waa nin aad u caadi ahayn xitaa by heerarka dunida crypto. In 1999, sano ah oo daraasad ka dib, uu ka soo hoos of De Anza College ay guushu ku baayacmushtarigii shakhsiyeed. In 2005, ayaa lagu xukumay toban bilood oo xabsi ah ku iibinayay rashka (sharci-darrada ah ee Maraykanka) maalinta Arbacada ah. In 2006, Roger u dhaqaaqay Japan iyo diidnay dhalashada Maraykanka. In 2012, oo wuxuu noqday mid ka mid ah aasaasayaasha urur aan faa'iido doon ah, Seeraar Foundation, in ay higsaneysaa in ay "jaangooyo, ilaaliyo, iyo kor loogu qaado isticmaalka Seeraar lacag cryptographic faa'iido u ah dadka isticmaala oo dunida ah. "Maalmahan Ver waa mas'uul ka ah adeegga boorsada cryptocurrency, Bitcoin.com
In ka badan sanadkii la soo dhaafay, magaca Roger Ver si joogta ah u muuqday in warbaahinta ay sabab u hordhaca ah ee cryptocurrency cusub, Seeraar Cash, oo sidaas oo kalena haatan inta uu taageeraa. Sida laga soo xigtay fekerkiisa, Seeraar lacagta caddaanka ah waa a “Seeraar run” in ay taageertaa qiyamka Satoshi Nakamoto.
waa musharaxa labaad ee ugu caansan horyaalka ah “run” Satoshi Nakamoto. In 2011, uu mid ka mid ah altcoins ay hore u samaysay, Litecoin, kaas oo u muuqday iyadoo ay sabab u fargeeto ku network Seeraar ah. Dadka aad isla dhexmarayo ayaa in Litecoin waxaa laga yaabaa in “lacagta u dahab Seeraar ayaa.” In 2013, Lee jagada agaasimaha farsamada kor u qaaday Coinbase, boosteejo ah oo cryptocurrency waaweyn. laakiin in 2017, wuxuu go'aansaday inuu ka tago shirkadda in ay diiradda saaraan horumarinta Litecoin.
Sanadkii la soo, Heerka cryptocurrency ku koray in ka badan toban jeer, oo maanta taagan $255. Bishii December, Charlie Lee ku dhawaaqay in uu ka iibiyey Litecoins oo dhan si qofna ku ashtakeeyaan kari saameeya ee isbedbedelka qiimaha. Waxa uu carabka ku adkeeyay in uu u socday in uu ka tago ma mashruuca iyo sii wadi doonto in mar walba uu u jahaysataan shaqada this.
ganacsade Seeraar a oo Maal iyo Ex-xigeenka Madaxweynaha at JPMorgan Chase-si fiican u yaqaan in bulshada crypto. Weiss ayaa loo arkaa mid ka mid ah wacdiyayaal blockchain ugu horeysay u qaadida technology in tacsida tan 2013. Waxa uu leeyahay blog guul, podcast ah, Youtube Channel, iyo in ka badan 80,000 kuwa raacsan on Twitter. CoinTelegraph inta badan soo saartaa uu comments iyo qalabka. Intaa waxaa dheer, in 2014, Weiss noqday Head of Research at BraveNewCoin.
Sida laga soo xigtay Weiss ah’ cilmi baaris oo la daabacay la soo dhaafay September oo ku salaysan yahay koritaanka jibbaaranaha ee dadka isticmaala Seeraar, by dhamaadka 2018, qiimaha Seeraar leeyahay awooda uu ku dhaafay $100,000 sumadda. Markii hore, Weiss ayaa sheegay in, by dhamaadka 2017, Seeraar gudbi lahaa $15,000 sumadda, aannu dhawrtaan on December 17. Weiss si cad u naqdiyay hanaanka casriga ah ee dhaqaale u ururinaya dhex ICO ah, sida 90% of ICO mashaariicda yihiin “Crore kaliya.”
waa co-aasaasaha mid ka mid ah mashaariicda cryptocurrency ugu weyn, Ethereum, iyo cryptocurrency hooyo, kuwaas oo ether. In 2013, Buterin daabacay cryptocurrency White Paper dhisay on blockchain ah, halkaas oo dadka isticmaala ku isticmaali kartaa heshiis smart in u siiyaan fursado badan oo u gaar ah.
Laga soo bilaabo bilowgii sanadka, heerka ether kordhay 57 jeer, iyo Buterin biiray rating ee Forbes American ah “30 under 30.” Bloomberg ka mid Buterin in liiska 50 ugu dadka saameynta badan 2017, iyo Forbes Ruush isaga ka mid ahaa in liiska 100 ugu Russia saameynta qarnigii.
Sanadkii la soo dhaafay, Buterin noqday mid ka mid ah ganacsatada yar oo Madaxweyne Putin kulmay intii lagu jiray St ah. Petersburg Economic Forum. Faahfaahinta wadahadalka aan shaaca ka qaaday, laakiin ka dib kulankan, maamulka Ruush sameeyey U-jeedin ku saabsan technology blockchain iyo cryptocurrencies, wacaya blockchain technology xiiso leh istaahila in dareenka. Waxaa intaa dheer, waxaa ogaaday in Ethereum socday ay u bilowdo mashruuc si wadajir ah la Vnesheconombank (WEBSITE); Sberbank biiray mashruuca caalami ah Enterprise Ethereum Alliance (EEE), taas oo hore ku lug leedahay ka badan 200 shirkadaha, oo waxay noqdeen Bank ugu horeysay ee Russian ah ee EEA.
Gavin Wood – Technologies sinnaanta, Polkadot
waa co-aasaha iyo hore CTO at Ethereum, kaasoo bedelay hore Ethereum White Paper qoran by Buterin galay barnaamij dhab ordaya. Haddaba Wood madax ka Technologies sinnaanta shirkadda, taasoo horumarisa software for shabakadaha blockchain. Waxa uu sidoo kale waa co-aasaasaha Polkadot xawaaladaha a, taasoo horumarisa hab maamuuska u oggolaan doonaa hagaajinta scalability network waayo, waafaqid weyn oo blockchains gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha.
The 2017 sano cadeeyay inuu yahay ku adag tahay Wood. Bilowga sanadka, shirkadda si guul sii daayay sinnaanta ah 1.5, ah macmiilka network Ethereum updated. Laakiin ka dib markii bilow wanaagsan, dhexe ee sanadka, Technologies sinnaanta wajahay dhibaato aad u daran.
Last July, boorsooyinka ayaa la jabsaday. Anonymous waxay heshay cayayaanka ee heshiiska la multisignature, kaas oo u ogolaaday inay ka xadaan 153,000 ethers (ku saabsan $32 milyan oo waqtiga). Sinnaanta sii daayay version cusub ee heshiiska smart ay u xaliyaan dhibaatada this. Si kastaba ha ahaatee, cayayaanka kale oo muhiim ah, kaas oo ku nool maktabadda oo maamula macquulka ah ee boorsada, lagu arkay dalka November. Sidaas darteed of qalad barnaamijyada а ee, ku dhowaad $152 million ayaa la xayiray ee isticmaala sinnaanta’ xisaab.
Sida laga soo xigtay Wood, oo dhan users’ hantida digital ku kaydsan madal ay tahay mid amaan ah, laakiin t aan weli suurtagal ah si ay u soo jiid ka shabakadda. Waxaa xusid mudan in ka mid ah hantida qaboojiyay ahaa $98 million kiciyey by xawaaladaha Polkadot ku dhex ICO ah.
The versions ugu caansan ee ka dambeeya kuwaas oo run ahaantii waa magaca Satoshi Nakamoto waxaa soo socda:
Nick Szabo - Saynisyahan ah oo duurka ku ah computer science, cryptography, iyo sharciga, iyo sidoo kale cilmi-ka mid ah heshiisyada smart iyo cryptocurrency.
Charlie Lee - Abuuraha reer Litecoin.
Neal King, Vladimir Oksman, iyo Charles Bry - qorayaal codsiga patent ah, loo yaqaan “CUSBOONAYSIINTA iyo qaybinta furayaasha sirta.”
Michael Klare - graduate ah cryptography in College of Dublin.
Hal Finney - takhasuska cryptography a.
Dorian Nakamoto - muwaadin u dhashay dalka Mareykanka (California) ka soo jeedo dalka Japan.
Craig Wright - ganacsada ah Australia.
Eeloon Miski - billionaire caan ah, oo madax ka ah Tesla iyo Space X, iyo xubin ka mid ah Guddiga at SolarCity
Dhamaantood, marka laga reebo Craig Wright, dafiri ay ka tirsan cryptocurrency ugu horeysay. Waxaa laga yaabaa in, waa gabal heer sare ah news suuqa crypto sababtoo ah Nakamoto heysta 5% dhammaan bitcoins. Sidaas, Nakamoto, haddii la doonayo, si weyn u saamayn ku yeelan kara heerka Seeraar iyo suuqa crypto.
South Korea ayaa la sheegay in jaangooyaha amarada 12 weydaarsiga cryptocurrency in dib loo eego heshiiska macaamiisha
corpor South Korea ee ...
Argentina becom bangiga ...
Post Previous:Blockchain News 9 January 2018
Post Next:Blockchain News 10 January 2018